DAAWO: Koox qaab cajiib ah cabsida ula dagaallanta ciyaar kasta ka hor!! – Gool FM
(Skopje) 19 Agoosto 2017 – Gegada San Siro waa garoon ay koox kastaahi ka baqdo iskaba daa koox ku cusub saaxooyinka Yurub sida Shkendija, oo ay haatan Milan ku hoggaaminayso 6-0 iyadoo ay harsan tahay lugta 2-aad ee kala baxa Europa League.
Kooxda macallin Qatip Osmani, ayaa kooxdiisa u diyaariya qaab ay ula dagaallamayaan neerfoosada iyo cabsida ciyaaraha ka hor, si sare loogu qaado xaaladda niyadeed ee laacibka.
Muuqaal uu daabacay Gazzetta TV ayaa waxaa lagu arkay kooxda Shkendija oo samaynaysa arrin la yaab leh: 11-ka laacib ee garoonka gelaya ayaa safanaya deeto laacib baa dhexda istaaga isagoo kubadda madaxa ugu dhiibaya laacib kasta oo isna madaxa ugu soo celinaya, ilaa laacibka ugu dambeeya uu kubadda ku rido kolay yaalla bartamaha.
SERIE A: JUV VS CAG 3-0...Juve oo ku badisay ciyaar taariikhda gashay + Sawirro
HORDHAC: Tottenham Vs. Chelsea